Itreyila yokuqala yexesha lesibini likaTed Lasso ngoku iyafumaneka kwiYouTube | Ndisuka mac
Itreyila yokuqala yexesha lesibini likaTed Lasso ngoku iyafumaneka kwiYouTube
Ngexesha lomnyhadala olayishwe ngentwasahlobo, apho iApple ibonise uluhlu lweMac entsha, iprosesa ye-iPad eneprosesa ye-M1, i-Apple TV entsha kunye neebhakoni zeendawo zeAirTags, inkampani esekwe eCupertino yamkela umsitho kunye Itreyila yokuqala yexesha lesibini kuthotho lweTed Lasso.
Eli xesha lesibini, elinomhla wokukhutshwa ucwangciselwe i-23 kaJuni, izakubonisa uJason Suedeikis ngeziganeko ezintsha, ngakumbi ii-antics ezintsha. Le trailer yokuqala iyafumaneka ngoku kwisitishi seYouTube seApple TV +, ke Ukuba awuyilandelanga le ntetho kwaye wayiphosa, ngoku unokuyibukela.
UTed Lasso uye waba luthotho lwe Eyona Mpumelelo inkulu yeQonga lika-Apple lokusasaza iVidiyo, uthotho oluye lwaphumelela uninzi lwabatyunjiweyo olufumene kwiinyanga ezidlulileyo, iGolden Globes lelona bhaso laziwa kakhulu kuwo onke lawafumeneyo.
Ukongeza kwiGlobal Globes yomdlali weqonga obalaseleyo, uJason Sudeikis naye uphumelele Ibhaso le-SAG laGqirha oGqwesileyo kuthotho lweeKomidi kwaye uthotho lwanikezelwa njengowona mdlalo uhlekisayo ngaMabhaso okuGxeka.
Kwiitamatisi ezibolileyo, unamanqaku okugxeka angama-91% kubagxeki ngelixa abaphulaphuli befikelela kuma-97%. Ngokomyili wolu ngcelele, uTed Lasso uya kuba nayo ixesha lesithathu nelokugqibelaNangona iyaqhubeka ukugcina impumelelo efanayo neyexesha lokuqala, kunokwenzeka ukuba abavelisi bayo kunye noJason Sueikis bayakuthathela ingqalelo ukuqhubeka nothotho.
Eli xesha lesibini eliza kuqala kwiinyanga ezi-3, longeza kubalingisi USara Miles, njengoko ugqirha wezengqondo kwezemidlalo oqeshwe ukunceda iqela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Itreyila yokuqala yexesha lesibini likaTed Lasso ngoku iyafumaneka kwiYouTube